အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Octahedron80 - ဝီကီပီးဒီးယား
မင်္ဂလာပါ Octahedron80။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Request for bot action[ပြင်ဆင်ရန်]
Hi, As you areaoperator of ‎OctraBot, I want to request you something. Please edit the pages that are in Category:ရန်ကုန်ဒေသကြီး to Category:ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရွာများ. Pages count in Category:ရန်ကုန်ဒေသကြီး is around 1700. Thanks Ninja⛧Strikers «☎» ၀၉:၂၈၊ ၁၅ ဇွန်​ ၂၀၁၅ (UTC)
Yes. The bot can do the task. But without bot flag, I can't continue any more. I already have requested in Wikipedia:Bots. Unfortunately, no steward visits that page. So I must go to request at Metawiki next week. --Octahedron80 (talk) ၀၂:၂၇၊ ၁၆ ဇွန်​ ၂၀၁၅ (UTC)
Now got bot status from steward. I can do the task. --Octahedron80 (talk) ၀၁:၄၄၊ ၂၁ ဇွန်​ ၂၀၁၅ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Octahedron80&oldid=430291" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။